🥇 ▷ Dota 2 wuxuu heli doonaa Snapfire, geesi cusub. ✅
Dota 2 wuxuu heli doonaa Snapfire, geesi cusub.
Valve wuxuu shaaca ka qaaday cidda noqon doona halyeeyga xiga DOTA 2, kiiskan wuxuu noqon doonaa ayeeyo ayeey fuushan halyeeyada weyn iyo arsenal hubka oo aysan ka waaban doonin inay adeegsato. Halyeeyga da’da saddexaad ayaa loo yaqaan ‘Snapfire’ wuxuuna imaan doonaa bilaha soo socda maadaama lagu dhawaaqay inuu diyaar noqon doono ciyaarta ka hor xilliga qaboobaha 2019.
Tani waxay ka dhigan tahay inuu Valve haysto illaa dhammaadka Noofembar inuu ku soo bandhigo ugu yaraan Imtixaanaadka Imtixaanka. Wax yar kama ognahay halyeeygan ka sokow kan trailer Waxaa la daabacay maanta, in kastoo aan ka fikiri karno xirfadahooda ku saleysan sheekada yar ee aan ku aragnay fiidiyowga.
Ha taaban buskudka
Snapfire waa marwada hubka in la qaado, fiidiyowga waxay qabaneysaa diyaarinta kukirta ee kudhaca ah laakiin Batrider iyo jilayaasha kaleba waxay isku dayaan inay xadaan sabab uun. Dhowr daqiiqadood ayaa ay ku maareeyaan laakiin kani waa trailer ka socota Snapfire sidaa darteed waxay ku tusaysaa inay ilkaha ku hubaysan tahay.
Marka hore waxay ku tusaysaa rasaas aad u weyn oo leh dab xoog leh ka dibna qoryaha mashiinka wareegaya ee aad gasho marka lagu dhejiyo liinta, kaas oo jidka agtiisa ah naqshad aad u lamid ah chimuelo ee Sida loo tababaro Dragon.
Waxay siisaa fikrad ah in Snapfire lagu dhejin doono had iyo jeer waqtiga uu saaran yahay qiiqkiisa gaarka ah maxaa yeelay hubka ayaa ku jira buurtan, laakiin waxaa suurtogal ah inuu dooran karo inuu dul maro iyo in kale. Xayawaankan ayaa duulaya laakiin si dhakhso leh ayuu ugu socdaa si uu ugu gaadho Batrider ka dib markay xadaan cookies-ka.
Ugu dambeyntiina, Liyuuga ayaa sidoo kale la muujiyey inuu tuurayo kubbad saxan oo sax ah si uu uga soo kabto macmacaanka hada la dubay Waxay si daacad ah u muuqataa inay si xoog badan u awood badan tahay geesi, laakiin dabcan tani waa trailer oo ciyaar-ciyaar ahaan maahan inay intaas badato. Waxaan uga tagnaa qeybta hoose ee trailer.